Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? מא ọ ב ụ, כבר בלוג Nweela ị na-ejighi n’aka etu ị ga-esi ruo ọkwa nke ọzọ?
0.0.2 ג’יני קפטרה ndu a? Obere ihe gbasara onwe m
1 Isi nke 1. בלוג מקוון לגרד
1.1 1. מארח האינטרנט Họrọ ezigbo na aha ngalaba
1.1.2 Bochum Weebụ – Ebee ka a ga-esi wezie בלוג gị
1.1.3 בלוג אקוואדורו nke akwadoro maka Newbies
1.3 3. השתמשו בוורדפרס לאתר האינטרנט המארח
1.3.2 W Wordnye WordPress Otu P Oa
1.5.1 מארה גברוגבורו
1.5.2 Ie eji eme ihe
1.5.3 Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ בלוג kachasị mma
1.5.4 Ngwa ndọkụrịta maka גוטנברג
2.1.3 3. Isiokwu nike ikenọgigide
2.1.4 4. אורו
3 Isi nke ise 5. בלוג Growtọ
3.3 3. Gbalịa mee ka בלוג gị dị mfe ọgụgụ
3.4 4. בלוג Ikwu
3.5 5. פלטפורמת Ajụjụ Q&א
4.2 אדזי אסראזה
4.4 נטוזיאקה & ניושה
4.5 מדיה חברתית, אחה & קידום אתרים
ג’יני קפטרה ndu a? Obere ihe gbasara onwe m
Ezubere M Bochum Nzuzo Wepụta (WHSR) עד 2008, na ekele akụkụ nke nnabata nnabata ọde blọgụ anyị ji ike gaa ike. Kemgbe ahụ, WHSR etolitela ghọrọ otu n’ime saịtị ndị isi na Net maka ndụmọdụ ntanetị, ma adọtala m ka ha mata ụfọdụ olu siri ike na ịde blọgụ nke oge a – ha niile aụụụụụ na na nọ aka na na , na-eme ọ bụ ihe a ga-eji nweta onye ọ Bụla nke na-ebido ịga ebe ịde blọgụ nke onwe.
אתר na ntuziaka enweghị nzuzu a, m ga – ewetara gị ụfọdụ ngwa ngwa, nghọta dị mfe nghọta na karịa ụzọ dị mma maka nsogbu ịde blọgụ gị – sitere na ahụmịhe nke m na n’he na-nah.
Isi nke 1. בלוג מקוון לגרד
Ọ dị mfe ma dịkwa ụnụ ala ịmalite blọgụ עד 2020.
Akụrụngwa ịde blọgụ kachasị ewu ewu, WordPress.org, bụ n’efu. לחץ על אמפרה emepe emepe WordPress na plugins bụ n’efu. Ma enwere ọtụtụ nde nkuzi n’efu na-amalite gị (gụnyere nke a). Naanị ihe ị ga – eri bụ ịmalite blọọgụ bụ אגו ị na – akwụ maka onye webụsaịtị na aha ngalaba.
אוי דורו anya, nwere ike nweta oke aghụghọ na emesịa ogbo; מאנה לא תאהב, היה צריך להיות אימאה אחד ọ בליה היו קופוטו לאינטרנט. N’ezie ị nwere ike ịmepụta בלוג n’ezie ma mee ka ọ na-agba ọsọ na nkeji 20 na-esote. Nzọụkwụ ndị a kpọtụrụ aha na usoro ndị a bụ kpọmkwem otu m si emepụta blọọgụ m na mbido.
מארח האינטרנט של Họrọ ezigbo na aha ngalaba
תוכנת וורדפרס תורמת למארח האינטרנט עבור gụụ ọhụụ (אם אתה מכיר את זה).
Bonae na WordPress gi ma bipute post mbu gi.
מה… nke ahụ niile.
Easyda mfe? הימור nzọ!
M ga-eje ije gị n’okpuru ebe a. Na-eche חינם iji ọ bụrụ na ị marala etu esi אהאזי בלוג nke gị.
1. מארח האינטרנט Họrọ ezigbo na aha ngalaba
בלוג Iji bido gbara onwe gị, ị ga-ebu ụzọ chọọ ngalaba aha na akaụntụ nnabata web.
Ngalaba gị bụ aha blog gị. Ọ bụghị ihe anụ ahụ w nwere ike imetụ ma ọ bụ hụ; kama ọ bụ ụdị mkpụrụedemede na-enye weebụsaịtị gị aka ịmata – dị ka aha akwụkwọ ma ọ bụ ebe. Ngalaba gị na – agwa ‘ndị ọbịa’ ụdị הבלוג ha na – eleta.
Nlekọta weebụ, n’aka nke ọzọ, bụ ebe ị na-echekwa ọdịnaya בלוג gị – okwu, isiokwu בלוג, onyonyo, vidiyo, na ndị ọzọ.
אתה היית אוהבת את זה, אהה נגאלבה, תאתר את האגדה. GoDaddy, AhaCheap, Hover, na Domain.com באמצעות אידיאליות – edebanye aha ndị ama ama na ahịa.
Rịba ama na ọ dị mkpa ịdebanye aha ngalaba na onye na-elekọta weebụ gị. Naanị n’ihi na onye na-elekọta weebụ gị na-enye ngalaba n’efu anaghị apụta na ị kwesịrị ikwe ka ụlọ ọrụ Bochum na-achịkwa aha ngalaba gị. Onwe m, ana m eji NameCheap jikwaa aha ndebanye aha ngalaba m; מאנה ndị ọzọ na-edeba aha ngalaba aha kwesịrị ịdị mma. אתר n’ime nke a, enwere m ike ịgbanwe ngalaba ngalaba DNS m oge ọ bụla achọrọ m ma zere ịbụ onye akpọchiri m otu web host otu. Ana m akwadosi gị ike ime otu ihe ahụ maka nchebe gị.
Bochum Weebụ – Ebee ka a ga-esi wezie בלוג gị
Na ntinye nnabata – Ọ bụ ezie na nchịkwa nnabata dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ (VPS, igwe ojii, wdg), ị ga-achọ obere ego (oge <$ 5 לחודש ndebanye) na ihe ọmụma ọrụ iji malite. Mgbe ị na-ahọrọ onye ọbịa weebụ maka בלוג gị, ihe ndị a bụ ihe ise ga-echebara echiche:
מהירות – needchọrọ onye nnabata nke na – ebu ngwa ngwa n’ihi na ọsọ na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ na ogo ọchụchọ.
Ọnye ọnụahịa – בוכום נא <5 $ לחודש מו ezigbo mmalite, ichoghi oru ego di elu na ogbo a.
אימא Ilọ na-eto – will ga – achọ nkwalite ndị ọbịa (atụmatụ ndị ọzọ, ikike sava ndị ọzọ, wdg) ka blọọgụ gị na – eto.
בלוג אקוואדורו nke akwadoro maka Newbies
Nlekọta blọọgụ abụọ na InMotion Bochum הוא $ 3.99 לחודש.
Alele bụ otu n’ime web host web dị ọnụ ala karịa, ọkachasị n’oge nnabata afọ ezumike nka. N’agbanyeghị ịbụ ụlọ ọrụ Bochum mmefu אגו, Hostinger na-enye ọtụtụ atụmatụ atụmatụ Bochum dị mma maka ndị na-ede blọgụ.
SiteGround na-akwụ ụgwọ $ 3.95 לכל בלוג של maka otu.
למשל, ịkwesịrị imelite ndekọ DNS na ngalaba aha na-edeba aha (ebe ị debanyere aha ngalaba gị na nzọụkwụ # 1) na-arụtụ aka na sava weebụ gị (InMotion Hosting, Hostinger ma ọ bụ SiteGround).
DNS גוזורו אל נגלבה אחא סיסטם הוא אאא-ג’י יא אדוזי onye ọrụ ọ בלה נא-אבטה kwupụta adreesị IP nke סווה אההụ. Yabụ, mgbe onye ọrụ batara “WebHostingSecretRevealed.net” ihe ndekọ DNS ga-ebugote adreesị IP nke onye web m ma jeere onye ọrụ m saịtị ahụ.
Nke a bụ ntuziaka usoro maka iji melite בלוג בלוג na na GoDaddy או Namecheap.
3. השתמשו בוורדפרס לאתר האינטרנט המארח
Iji malite היה אתר בלוג ב- iji WordPress ị ga-ebu ụzọ wụnye sistemụ ahụ n’ime onye na-elekọta weebụ gị. האם היו אייג’י נייק א מיי נקה א, מא ọ ב ụ יג’י נגווה נוו ye נוי אוגטה נגבה. Methodszọ abụọ a dị mfe nfe ma enwere ike ịme ya ngwa ngwa.
הגש את הנתונים באמצעות WordPress na Sava weebụ gị, yana onye ọrụ MySQL הוא לא היה הגה נילה מאקה ịnweta ma gbanwee ya.
Mepee wp-config.php na ederede ederede (פנקס רשימות) אם אתה מעוניין לקבל מידע על נתונים gchekwa gị.
השתמש ב- WordPress na ọnọdụ achọrọ na sava weebụ gị.
Gbaa akwụkwọ edemede וורדפרס באתר הוא לא ịnweta wp-admin / install.php na ich nchọgharị weebụ gị. Ọ bụrụ na ị wụnye WordPress na ndekọ ndekọ, ị ga-aga: http://example.com/wp-admin/install.php; לחץ על וורדפרס בקטגוריות ויהיה לך בנא-אקפ ak בבלוג, לחץ כאן, בכתובת: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
W Wordnye WordPress Otu P Oa
לא נתן לאבד את זה בלי שום דבר בוורדפרס חה.
אתר למען nkwado nke ọrụ ntinye ọpịpị dịka Softaculous na Mojo Market Place (במקום אחר המארח המקוון ị na-eji), usoro nrụnye dị ezi n’iru ma enwere ike ịme ya na ole na ole dị mfe.
Maka ntụaka gị, ihe onyonyo ndị a na-egosi ebe ị nwere ike ịchọta njikwa nwụnye akpaaka gị לוח מחוונים. Iji wụnye WordPress, d, nnọọ pịa akara ngosi gbara gburugburu ma soro ntuziaka akaebe zuru oke – מערכת WordPress gị kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ na erughị nkeji ise.
Ihe Nlereanya: האם ניתן יהיה להשתמש בוורדפרס ב- WordPress באופן בלתי אפשרי כדי לחלוף את כל אלה שאחראים על ההתקנה של Hostinger Auto Host.
היינו אוהבים לעשות את זה באינטרנט אל- מאה וייבה מאנה אוסורו ובוטו. יא רק נוואטלה מאו בורו נא ג’יגי אוטי נדי אגה א מ נ ו גוסי נבה א.
אנו ממליצים על וורדפרס באמצעות usoro ọde blọgụ kachasị mma maka newbies. התחל לחסל את הסיטואציה של ווורו נא, כלומר הקריטריונים של 95% ייקחו את ארצות הברית וורדפרס. N’ụwa niile, ọ fọrọ nke nta Nde blọọgụ 27 na-agba na WordPress.
Ozugbo itinyela sistemụ וורדפרס תוכנה, כתובת URL תופיע עבור כל וורדפרס. N’ọtụtụ oge, URL ahụ ga – abụ ihe dị ka nke a (ọ dabere na folda ị wụnyere na WordPress):
URL של Gaa a wee banye aha njirimara na paswọọdụ gị אתר n’ebe ahụ, ị ​​ga-anọ ugbua na njedebe (לוח מחוונים) nke saịtị WordPress gị – nke a bụ akụkụ nke בלוג ebe naanị gị dịka onye nchịkwa nwere ike ị.
שלח את עמוד הבלוג ל- WordPress Gutenberg berghụrụ.
WordPressdị WordPress kachasị ọhụrụ n’oge ederede bụ ụdị 5.3.2 – עד לא כלום וורדפרס גוטנברג זה יכול להיות. Gutenberg na-eweta mgbanwe dị ukwuu na nyiwe WordPress. Nke a bara uru maka ndị mbido ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị ka ịtọlite ​​ụla n’azụ na ihe ndị ọzọ anaghị achọ ụkọ. Usoro ngọngọ na-enyere aka na njikwa okirikiri ederede.
Iji dee ma bipụta ọkwá ọhụrụ, gọọgharịa gaa n’akụkụ aka ekpe, לחץ על ‘פוסטים’> ‘טיני נקובה’ נא גאה עדוזי נדרדרדה. P’a ‘תצוגה מקדימה’ ka ị hụcha ihe ihe dị na njedebe (ihe ndị na-agụ gị ga-ahụ), pịa ‘Bipụta’ ozugbo oge zuru ezu.
שלום! עכשיו bipụtara akwụkwọ הבלוג mbụ gị.
Nke a bụ ebe ị nwere ike ịnweta isiokwu WordPress n’efu. Ederede edepụtara na akwụkwọ ndekọ a na-agbaso ụkpụrụ siri ike nke ndị mmepe WordPress חדש, יה סתם, n’echiche m, nke a bụ ebe kachasị mma iji nweta atụmatụ isiokwu adịghị mma.
Ụzọ ọzọ ị ga-esi nweta isiokwu dị elu nke a na-akwụ ụgwọ bụ ịdenye aha na מועדונים מועדון WordPress.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị nụrụ banyere klọb Okwu egwuregwu, le ka ka si si arụ ọrụ: אתה na-akwụ אגו ole iji sonyere klọb ahụ, ị ​​na-enwetakwa atụmatụ dị iche iche enyere na klọb. נושא ushazi ngosi enyere na klọbgụ נושא.
Mara Gburugburu Gburugburu – קרב 80 מודעות ל- WordPress gburugburu, e e e a a ok ok ok ok ok ok ok ok.
Gaa na: StudioPress.com. אההה: $ 129.95 / isiokwu ma ọ bụ 499.95 $ / ndụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ WordPress oge, mgbe ahụ, ị ​​nụla banyere StudioPress. Ọ na-ewu ewu maka ya Jenesis Framework, והיה מינימליסטי ב- SEO-enyi na eni WordPress kpuchie niile StudioPress gburugburu.
StudioPress na-enye ọnụahịa mgbanwe dịka mkpa gị. Okpokoro Genesis na isiokwu nwata nwere maka ugwo ugwo nke 59.99 $. Ihe kachasị mkpa, nke gụnyere Igodo Jenesis, na-efu $ 99 ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta niile gburugburu, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ 499 $.
Ie eji eme ihe
Njikere פשוט saịtị ndị נושאים אומנים nyere.
Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ בלוג kachasị mma
בלוג מקוון na njikarịcha arụmọrụ. מטמון סה”כ W3 na Nrụ ọrụ ọsọ ọsọ bụ nhọrọ kachas ịị u.
Ih mgbakwunye arụmọrụ abụọ ndị ọzọ ị kwesịrị ịlele Igwe ọkụ, na WP Super Cache. התלקחות בענן בנגבה מגבבקוווניה נקה ụlọ ọrụ CDN חדש, ענן התלקחות; אתר WP Super Cache mepụtara לאתר na Donncha na Automattic, ụlọ ọrụ mepụtara ma na-arụ ọrụ וורדפרס באנגלית.
Ihe mgbakwunye mkpọchi bu ihe kwesiri ntaneti na ụwa ịde blọgụ ọgbara ọhụrụ – ọ na – eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị mma site na ịbawanye arụmọrụ sava ahụ, belata oge ewepụọs nae.
Ụ bụrụ na blọọgụ gị nwere ọtụtụ onyonyo dị na ya – tulee itinye EWWW Image Optimizer. Ọ bụ otu njikarịcha ihe oyiyi na-eme ka enwee ike iwepụta ihe eserese onyonyo nke ọbá akwụkwọ gị. O nwekwara njiri aka na-egosipụta mkpirisi onyonyo iji belata ogo onyonyo mgbe ị na-ebugote ha. אתר na iji eserese kachasị mma, ị nwere ike belata oge ibu peeji ma rụpụta arụmọrụ saịtị ngwa ngwa.
Mụtakwuo: קידום אתרים 101 101 עשה זאת בעצמך
Ngwa ndọkụrịta maka גוטנברג
האתר אינו מקיים את גוטנברג על ידי WordPress 5.0, ואינך מכיר את אתר האינטרנט של אתר האינטרנט של האתר בו אתה זקוק לאתר. אתר לא מעוניין, WordPress na-enye setịpụrụ ngọngọ ọdịnaya dịka paragraf, eserese, bọtịnụ ịkpọ oku na-eme, koodu mkpirisi, na ndị ọzọ. אתר לא תוספות תוספות Gutenberg, ị ga – agbakwunye ihe ndị ọzọ na – etinye aka (שאלות ותשובות – שאלות נפוצות, אקורדיון, פרופיל אדמדה, קרוסלה, טוויטים, בלוקים GIF, wdg) לבלוג Gị.
בלוקים הניתנים לגיבוש, אולטימטיבי, עד CoBlocks אני מתכוון לתוספי בלוק גוטנברג na-akwụghị ụgwọ ịnwale.
Nke a bụ nke ọhụụ dịka newbie na-amalite blọọgụ: ha ga-ede banyere ọrụ ha na Mọnde, ihe omume ntụrụndụ na יום שלישי, fim ha lere na Wednesdayde, na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ngwụsị izu. Na nkenke, ndị a na-ederede na isiokwu dị iche iche n’ejighị isi okwu ọ bọla.
אוי סירי אייק אינווה ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị na – agụ akwụkwọ na – eguzosi ike n’ihe mgbe ị na – ede blọgụ na – akpaghị aka n’ihi na ndị mmadụ agaghị ama ma ọ bụrụ na ị na nak ma ọ bụ akwụkwọ na – akatọ akwụkwọ. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ga-achọkwa ịkpọsa gị maka na ha amaghị ihe ị bụ. Iji wuo הבלוג na-aga nke ọma, ịkwesịrị ịchọta niche.
איג’י צ’אטה ננג’ינג בלדיג זירי ezi, ebe a bụ isi ihe ị ga-atụle.
Ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị chere "M ga-achọ ka mmadụ dee הבלוג banyere ya", nke ahụ bụ oge a-ha. Ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ịchọrọ ịmatakwu banyere, mgbe ahụ, ọ ga-abụ isiokwu nke ndị ọzọ chọrọ ịma.
Kedu ihe ọmụma gị pụrụ ich? Kedu ka ị ga – esi new ihe dị iche iche na isiokwu nke onye ọ bụla ọzọ nwere imke? O nwedịrị ike ịbụ אתר na mkparịta ụka gị na ọkachamara.
Omumaatu: הבלוג של ג’ינה nke, Na-ekpuchi ezughị okè, na-elekwasị anya n’inyere ndị nne aka ịzụlite ụmụ nwere mkpa pụrụ iche.
Cheta na ị ga-ede akwụkwọ, ịgụ ma na-ekwurịta okwu gị kwa ụbọchị maka afọ ole na ole sochirinụ. Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị na isiokwu הבלוג gị, ọ ga-esiri gị ike ijisi gburugburu mgbe niile.
Ọz ,kwa, ị ga-enwe mmasị ide ih ndị ahụ.
3. Isiokwu nike ikenọgigide
Ọ bụ ezie na esemokwu dị ukwuu, ọ gaghị eme ka okwu gị bụrụ ebe a n’izu na-esonụ. דיקה ụmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere nnọọ mmasị na Vine ma malite לבלוג dabere na ya, mgbe nke ahụ daa na ejiji ị ga-abụ nke ọdịnaya. Ọ ka mma ka ị lekwasị anya n’inwekwu okwu n’ozuzu, dịka "ịmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze" ma ọ bụ "ngwa ọdịyo dị egwu". N’ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ụda daa na ejiji, בלוג gị ka nwere ike ịnọgide na-ele anya maka ihe ọ Bụla na-agbanwe ya.
Gị בלוג kwesịrị ịdị נישה na iwere ike ime ego.
Jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ga-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ma mepụta אגו – ma ọ bụ אתר na mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa. Ọ bụrụ na ị na – ede blọgụ iji kwado azụmahịa gị dị, blọọgụ ọ na – ebute ndị ahịa ọhụrụ? Ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ naanị n’ihi na ị nwere mmasị na isiokwu ahụ, enwere ụzọ ị ga-esi tinye בלוג nke gị n’otu n’otu?
M na-eji SpyFu, ngwa mgbasa ozi nke Pinye aka-na Pịa aka ọrụ, iji tụta uru ọghọm bara uru mgbe ụfọdụ. Echiche m n’azụ nke a – ọ bụrụ na ndị mgbasa ozi na-akwụ puku kwuru פוקו דולר ל- Google AdWords, ọ ga-enwerịrị אגו ị ga-eme n’ubi a. Lee ihe atụ abụọ m chọtara:
Ihe Nlereanya # 1: Nke a bụ stats mgbasa ozi maka onye na-emepụta ihe eji eme egwuregwu (na-eche ụdị egwuregwu dịka Adidas ma ọ bụ Nleba Ọhụrụ mana ntakịrị). Ọlọ ọrụ a na-etinye ihe karịrị 100,000 $ קווה לכל אחד אדוורדס באמצעות Spyfu.
Ihe Nlereanya # 2: Nke a bụ mgbasa ozi mgbasa ozi maka onye na-eweta ngwanrọ IT. E nwere 20 ndị ọzọ nnukwu egwuregwu na niche a. Ọlọ ọrụ a, karịsịa, mgbasa ozi azụtara na mkpokọta 3,846 ל- Google מה ג ‘יירי זה יכול לקבל $ 60,000 $.
Mụtakwuo: Otu esi ede ma ọ dịkarịa עלא otu nnukwu ọdịnaya n’otu izu ugboro ugboro
Isi nke ise 5. בלוג Growtọ
Eziokwu dw mwute nke ọtụtụ ndị na – ede blọgụ nọ na ya ọ werela ọtụtụ oge iji wulite akwụkwọ חה. קבלת נווטה ניוצ’ה פוקו פג’י מבה חה היו וויקים היו ọnwa, ụfọdụ blọọgụ ọkacha mara ọfụma na-abịabakwa ebe ahụ.
Ndị a bụ atụmatụ ụzọ ihe ise ga-enyere gị aka iwere blọgụ gị site na nlele peeji 1 ruo 1,000.
Ndị mmadụ na-eriju afọ na mmelite mgbasa ozi nke mgbasa ozi, ndepụta ozi ọma, ozi ịntanetị, na ụdị mgbasa ozi dị iche iche. Ọ na-esikwu ike ime ka ndị mmadụ gụọ ọdịnaya gị. Agbanyeghị, ị ka nwere ike ịme nke ọma ma ọ bụrụ na ịmara onye bụ ndị na – ege gị ntị bụ na ihe ha na – achọ. Chee echiche banyere andhere dị na niche gị, ụdị ọdịnaya adịghị efu na otu ị ga – esi weta ndị na – ege gị ntị uru.
Jiri ngwaọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji soro ihe na-aga nke ọma na מדיה חברתית. נבה דאו אוטו, ị nwere ike iwepụta echiche ọdịnaya nke na-enweta ezigbo nzaghachi site na mgbasa ozi mgbasa ozi.
ג’ירי ụnụọgụ nlele na YouTube chọta isiokwu ndị mmadụ nwere mmasị na ya.
Kwesịrị ịkekọrịta פוסטים ב- ugboro ugboro. Ọ bụrụ n’ịkpọku gị ka ị sonyere bọọdụ Pinterest nke dabara na niche gị, debanye ma kekọrịta na ịza ajụjụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na i sonyere na ndepụta nke ndị na-ede blọgụ nwere echiche, ọdịmma bụ na ha ga-ekerịta ihe ibe ha ande niile – kwa izu ma ọ bụ kwa ụbọchị. Nke a ga – enyere aka ọgụgụ gị na itinye aka gị.
טוויטר. Ikwu na nzaghachi ndi otu ndi ozo. Kekọrịta ederede na akwụkwọ akụkọ gị. Gbakọọ ma kwụghachi ụgwọ blọọgụ ị hụrụ n’anya site na ịgosipụta otu izu ma ọ bụ ọnwa.
Jụọ otú ị ga-esi nyere onye ọzọ aka ma ọ bụ האתר n’inye ndị ọbịa akwụkwọ ozi. Na-ere ngwaahịa ha, jiri njikọ ha mmekọ, qualite njikọ ha na mgbasa ozi gị mgbe ị na-edecha ha. Dịka ohere iji weghachite ndị na-ede blọgụ, ndị na-ede blọgụ a ga-echeta enyemaka gị ma kpọọ gị ka ị bịa.
3. Gbalịa mee ka בלוג gị dị mfe ọgụgụ
Ọ na-ewe m iwe mgbe m chọtara blog nwere isiokwu enwere m obi anụrị naanị ịchọta ọdịnaya ahụ na nnukwu ederede, paragraf ole na ole, enweghị isi ma ọ bụ mgbọ na obere mkpụrụ okw. Nke ahụ na-achụpụ m.
N’elu ihe m hụtụrụla n’elu, blọọgụ gị ekwesịghị iji mmapụta na pịa pịa. קמה, היו nwayọ gosi ndị na – agụ ya hahe dere. Mara nsogbu oge ndị na – agụ akwụkwọ gị wee ghọta ihe kpatara ha iji nọrọ na saịtị gị.
Nke a bụ ihe ị ga – eme iji mee ka בלוג gị dịkwuo mfe ọgụgụ:
הבלוג של האבולי באתר הוא iji isi, sub-isi, isi mgbu, ma ọ bụ ndepụta edepụtara. Nke a na-enyere ọdịnaya gị aka ịhazi ka ahaziri nke ọma.
הבלוג של Kewaa na ngalaba ma ọ bụ paragraf. מגבידי ederede nwere ike iyi ihe na-emenye ụjọ ma na-eju ndị na-agụ ya anya.
Zere iji mkpụrụ edemede mara mma. Nggidesie ike na mkpụrụedemede nchekwa weebụ dịka Arial, ג’ורג’יה, Times, wdg.
ג’ירי בקי דף מאפה דה אה אהרוקוקו דוקפמקמק. Mee ka amụrụ ihe ị ga-agụ maka ụmụ akwụkwọ קלאס nke asatọ.
4. בלוג Ikwu
Gbanyụọ, ịza ajụjụ na blọọgụ bụ ụzọ kacha eleghara anya maka ewu okporo ụzọ בלוג – nke kachasị n’ihi na ndị mmadụ na-ackụ ime ka nnabata, mkparịta ụka bara uru na ndị bịara abụere mịa mụa Agbanyeghị, ịza ajụjụ banyere blọọgụ bụ ụzọ dị mma maka ewu okporo ụzọ na-adịkwa n’efu – enweghị ike ịgbagha nke ahụ!
Ewere iwu ọla edo abụọ iji mee ka nkọwa maka ịde blọgụ:
די ezigbo nkọwa mgbe niile. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe bara uru ị gbakwunye na mkparịta ụka ahụ, ahapụla ikwu (“Daalụ – הודעה על nnukwu”… ha abaghị uru)
Naanị dobe njikọ ebe dabara adaba. Achọgharịla ספאם, n’agbanyeghị ụdị ọnwale ọ nwere ike ịbụ; ọ ga-agbakwasị gị.
Mgbe iwu ọzọ (ọ bụghị iwu ọla edo, ikekwe), ọ bụrụ na ị hapụ njikọ, כתובת URL של enyela לבלוג gị. Kama nke ahụ, jikọta post nke gị mkpa nke na-agbakwunye uru na post na mkparịta ụka mbụ. רלוונטיות bi isi ebe.
5. פלטפורמת Ajụjụ Q&א
Nzukọ na ntanetị na Q&A bụ ebe dị mma ịnweta oche n’ihu ndị na-ege gị ntị nwere mmasị, nwere mmasị. Ihe a bu n’uche nyochaa mkparịta ụka na-aga n’ihu na niche gị ka ị wee chime mgbe ị nwere ihe ga – enyere gị aka ikwu (ma ọ bụghị, ọ bụghị post ọ bụla ga – abụ ohere – mana ụfọdọ ga – אמ). Ga-achọ ezigbo onye na-agụ akwụkwọ, dị ka Feedly, iji rụọ ọrụ a.
Mepụta ụfọdụ ọdịnaya omenala metụtara mkparịta ụka na-ekpo ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ajụọ otu esi eme koodu .htaccess koodu, ị nwere ike ide nkuzi wee zipu ya na blọọgụ gị – mgbe ahụ, na ngalaba Q&Ake saịtị ahụ, zaa onye chọrọ ya na teaser, jikọ ha na blọọgụ gị. iji nweta koodu na demos zuru ezu. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na otu onye jụrụ ajụjụ ahụ, ndị ọzọ nwere otu ajụjụ ahụ – azịza na njikọta okwu gị ga-aga n’ihu na-adụ ha ọdụ ma oge ahụ bịara.
N’ihe banyere usoro Q&איג’י מי ihe, m na-akwado
Quora, Klout, na Yahoo! Azịza – ndị a bụ ụzọ atọ kachasị mma nke ikpo okwu Q&א
Mụtakwuo: Choo uzo ozo iji tinye mon בלוג gi wee gụpụta nke קווין מולדון ụmụmụ ikpe na-ere BloggingTips.com עושה 60,000 $.
דקדוק – Kasị ewu ewu na ntanetị nnyemaaka.
אפליקציית המינגוויי – Jiri ngwa a dee mkpirikpi na nkwuwa okwu.
Fotor – דזי ma chepụta ngwa ọmarịcha ihe osise maka mgbasa ozi mgbasa ozi, akwụkwọ mmado, akwụkwọ ịkpọ oku wdg
Ọkachamara Ọtọ – Mepheta ihe osise mara mma site na iji ndebiri n’efu na ihe osise emere.
סקיץ ‘- Iche ndetu ihe onyonyo.
תמונה –chịchị – Ngwongwo na-emeri i ntughari nke onyinye.
תרשים פיק – Mfe okike ihe omuma ihe omuma.
Pixlr – נטנט ederede.
אייקון Onye Nchọta – Akwụkwọ ndekọ akara ngosi buru ibu.
Faili Morgule – Ihe kariri onyonyo 350,000 maka iji azụmaahịa.
נטוזיאקה & ניושה
הרפובליקה הטכנית – Akwụkwọ ọcha, akụkọ, yana ọmụmụ gbasara teknụzụ.
שרפה שיווק – Akụkọ azụmaahịa na – akwụghị ụgwọ.
ספריית Hubspot – Ezigbo akwụkwọ ntụaka na ahịa.
Ụdị Ụgha – צ’יטה isiokwu na – ekpo ọkọ kacha ọhụrụ na BuzzFeed.
Google התראות – Nweta ozi ịntanetị dị njikere na ọdịnaya ọhụrụ ị na-achọ.
מדיה חברתית, אחה & קידום אתרים
מנהל האתר של גוגל – Ngwá ọrụ nyocha saịtị n’efu nke Google.
Ebube di nma – Nbudata n’efu na-enye gị ohere inyocha profaịlụ njikọ saịtị (CF / TF).
מפרץ Na-aga-Azụ ahịa, ire & ngwa ọrụ akpaaka
סייר Explorer – Lelee metrik nke ọdịnaya (ma ọ bụ ndị asọmpi) gị.
Deck Tweet – Ijikwa otutu akaụntụ לוח מחוונים לטוויטר n’otu.
מועצת Kọlọtọ – Nnyocha ahịa ahịa mgbasa ozi.
Google Analytics – נתונים סטטיסטיים באינטרנט.
Matomo – Nchịkọta גוגל אנליטיקס.
YouTube – סטטיסטיקות של YouTube gị.
סטטיסטיקה של WP – בלוג T Wordlee WordPress gị na ndị ọzọ.
Nnyocha Ule – Lelee ọsọ דף האינטרנט zuru ezu.
GT Metrix – טוען דף אינטרנט של Nwalee ma soro ọsọ n’ụzọ zuru ezu.
1. אגו ole ka ọ na-eri ịmalite blọọgụ?
אגו ole echere ka ịmalite blọọgụ gụnyere aha ngalaba na nnabata weebụ dị n’okpuru 100 $ kwa afọ (10 $ קווה ọnwa). Ụnụ אגו a dabere na blọọgụ ejiri aka gị (iji WordPress). Nkwụsị nke ụgwọ ahụ ga-abụ: $ 15 קווה לכל היותר. .Com.
Iji nweta ezigbo foto maka otu esi akwụ ndị na-ede blọgụ ụgwọ, edepụtara m ha na ụdị 2 – otu bụ ebe ị na-emeso ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi ozugbo ebe nke ọzọ bụe ere bụ netwọk nyere.
Mgbe gị na ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi na-emekọrịta ihe, ị na-enwe ike ijikwa ọnụahịa ahụ. האתר של אתר האגו האינווטה הוא:
– עוזי mgbasa ישיר
– bọọdụ איוב
– Ederede na biputere פוסטים nkwado
3. הבלוג של Ka ịmalite n’efu?
אנא אהבתי את האתר החדש יותר את הבלוג הזה, אתה יכול למצוא WordPress.com, הטומבלר יכול להיות בלוגר. Iji mep mta הבלוג n’efu, ihe ị ga – eme bụ ịdebanye aha ma ị nwere ike ịmalite ibipụta ọdịnaya gị.
הו, אני לא צריך שום דבר. Enwere ọghọm dị na ọtụtụ ịde blọgụ ntanetị n’efu:
– Eww iwu dị n’elu ikpo okwu ọ בלה ịkwesịrị אידבה
– אהה גאלאבה נקה גה קא ọ ב ọ ụ bụrụ תת-דומיין d “ka “myblogname.wordpress.com” ו ọ bụ “myblogname.tumblr.com”
– E nere obere ọrụ, plugins na nhọrọ isiokwu ị nwere ike ịme blọọgụ gị
– Ụtụtụ mgbe, ikpo okwu anaghị akwụ ụgwọ iji gbochie בלוג gị
אני יכול לעקוב אחר בלוגים באתר הבלוגים באתר WordPress.org כאשר אתה יכול לקבל (אם אתה יכול להוסיף את זה). E wezụga imeri mmachi nke blog efu, mmụba nke blog gị nwere enweghị njedebe.
Ma, le ihe gbute azụ:
Eww iwu dị n’elu ikpo okwu ọ בלה ịchọrọ ka edebe
אהה גלגלבא נקבה תת-דומיין ga-abụ על ידי “myblogname.wordpress.com”
הצטרף לרשומות נוספות, תוספים לביצוע איזיוקווו ị nwere ike ịme na בלוג gị
Ụtụtụ mgbe, usoro ikpo okwu n’efu na -emechi ohere nke monetizing בבלוג
I modi migliori iniziano e hanno successo con un blog di progetti fai-da-te
نرخ تبدیل مکالمه سایت: چه نکاتی در مورد وبلاگ: نکات Velox + مطالعات موردی
Tlhahlobo ea Sephiri: Ke botsoa Likhamphani tsa hosting 28 tsa Live Chat támogatás
8 მეთოდები დაჩქარდეს წერა და ხარისხიანი ბლოგის შეტყობინებების წარმოება